Ngothando: phakathi kweemvakalelo kunye nengqondo (ikholamu 22) - Rabbi Michael Avraham
Eluthandweni: Phakathi Kweemvakalelo Nengqondo (Uluhlu lwama-22)
16 izimvo	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
Kwinxalenye yeTorah yale veki (kwaye ndicela) iparsha ethi “Uze umthande uYehova uThixo wakho” ivela kwicengcelezo yeShema, ethetha ngomyalelo wokuthanda uYehova. Ndithe ndakuva olo bizo namhlanje, ndakhumbula ezinye zeengcinga endandinazo ngaphambili malunga nothando ngokubanzi, nothando lukaThixo ngokukodwa, ndaye ndaneengongoma ezimbalwa eziloliweyo ngazo.
Phakathi kwemvakalelo kunye nengqondo kwizigqibo
Xa ndandifundisa kwi-yeshiva eYeruham, kwakukho abafundi abandibuza malunga nokukhetha iqabane, ukuba ndilandele imvakalelo (intliziyo) okanye ingqondo. Ndabaphendula ukuba kuphela emva kwengqondo, kodwa ukuba ingqondo kufuneka ithathele ingqalelo oko intliziyo ivakalelwa (uxhulumaniso lweemvakalelo, i-chemistry, kunye neqabane) njengenye yezinto kwisigqibo sayo. Izigqibo kuzo zonke iinkalo kufuneka zenziwe engqondweni, kwaye umsebenzi wentliziyo kukubeka izinto ezifuna ukuqwalaselwa kodwa zingagqitywanga. Kukho izizathu ezibini ezinokubangela oku: enye yezobugcisa. Ukulandela intliziyo kunokukhokelela kwimiphumo ephosakeleyo. Iimvakalelo azisoloko ziyiyo kuphela okanye eyona nto ibalulekileyo kulo mbandela. Ingqondo ilungelelene ngakumbi kunentliziyo. Eyesibini ibalulekile. Xa unikezela ngeentambo, awugqibi ngokwenene. Isigqibo ngenkcazo sisenzo sengqondo (okanye kunoko: ngokuzithandela), kungekhona imvakalelo. Isigqibo senziwa sisigwebo esiziqondayo, ngelixa iimvakalelo zizenzele ngokwazo kungekhona ngokwam ukugweba. Enyanisweni, ukuhamba emva kwentliziyo akusosigqibo konke konke. Kukwenza isigqibo kodwa ukuvumela iimeko ukuba zikutsalele emva kwazo naphi na apho zikhoyo.
Ukuza kuthi ga ngoku ingcamango ikukuba ngoxa uthando lungumbandela wentliziyo, ukukhetha iqabane akuyonto nje yothando. Njengoko kukhankanyiwe, iimvakalelo ngomnye woothunywashe. Kodwa ndicinga ukuba ayingomfanekiso wonke lowo. Nkqu uthando ngokwalo aluyomvakalelo nje, kwaye mhlawumbi ayisiyiyo eyona nto iphambili kuyo.
Kuthando kunye nenkanuko
Xa uYakobi wayesebenzela uRakeli iminyaka esixhenxe, isibhalo sithi, “Kwaye ziya kuba ziintsuku emehlweni akhe ukumthanda kwakhe” ( Genesis XNUMX:XNUMX ). Umbuzo uyaziwa ukuba le nkcazo ibonakala ichasene namava ethu aqhelekileyo. Ngokuqhelekileyo xa umntu ethanda umntu okanye into ethile kwaye kufuneka amlinde, yonke imihla kuye ibonakala ngathi ingunaphakade. Ngoxa apha le ndinyana isithi iminyaka yakhe esixhenxe yenkonzo yayibonakala njengeentsuku ezimbalwa kuye. Yinto echaseneyo nengqiqo yethu. Ngokuqhelekileyo kuchazwa ukuba oku kungenxa yokuba uYakobi wayemthanda uRakeli kungekhona yena. Umntu othanda into okanye umntu kwaye azifunele yena ngokwenene uzibeka embindini. Ngumdla wakhe ofuna ukuzaliseka, ngoko kunzima kuye ukulinda de awuphumelele. Uzithanda yena hayi iqabane lakhe. Kodwa ukuba umntu uyamthanda umlingane wakhe kwaye izenzo zakhe zenziwa kuye kwaye kungekhona kuye, ngoko ke neminyaka yokusebenza ibonakala kuye ixabiso elincinci.
UDon Yehuda Abarbanel kwincwadi yakhe ethi Conversations on Love, kunye nefilosofi yaseSpain, ipolitiki kunye nentatheli uJose Ortega i Gast, kwincwadi yakhe ethi Five Essays on Love, yahlula phakathi kothando kunye nenkanuko. Zombini zicacisa ukuba uthando yimvakalelo esembindini, nto leyo ethetha ukuba utolo lwamandla lujonge emntwini ngaphandle. Ngelixa inkanuko iyimvakalelo ephakathi, oko kukuthi, utolo lwamandla lujika lusuka ngaphandle luye kulo, ngaphakathi. Eluthandweni lowo usembindini uyintanda, ngelixa kwinkanuko lowo usesazulwini sisithandwa (okanye inkanuko, okanye inkanuko). Ufuna ukoyisa okanye ukuzizuzela isithandwa. Malunga noku iiscouts zethu sele zitshilo (phaya, phaya): Umlobi uyayithanda intlanzi? Ewe. Khona kutheni ezitya?!
Kwesi sigama kunokuthiwa uYakobi wayemthanda uRakeli yaye akazange amkhanuke uRakeli. Inkanuko ilawula, nto leyo ethetha ukuba inkanuko ifuna ukubeka kuye enye into ayinqwenelayo, ngoko akanakulinda ukuba sele yenzekile. Yonke imihla ibonakala ngathi ingunaphakade kuye. Kodwa umthandi ufuna ukunika omnye (othandekayo), ngoko akumkhathazi ukuba asebenze iminyaka ukuba oko kuyimfuneko ukuba kwenzeke.
Mhlawumbi omnye umlinganiselo unokongezwa kulo mahluko. Isikweko sasentsomini sokuvuswa kothando ngumnqamlezo we-Cupid onamathele entliziyweni yesithandwa. Lo mzekeliso ubhekisela kuthando njengemvakalelo evela entliziyweni yesithandwa ngenxa yento ethile yangaphandle. Esi ayisosigqibo okanye isigwebo sakhe. Kodwa le nkcazo ifanelekele ngakumbi inkanuko kunothando. Othandweni kukho into ebaluleke ngakumbi nengenathuku. Nangona kubonakala kuvela kuyo ngaphandle kwemithetho kunye nemigaqo kwaye ngaphandle kokuqonda, ingaba yingqiqo efihliweyo, okanye umphumo wengqondo kunye nomsebenzi womoya owandulela umzuzu wokuvuka kwawo. Ingqondo eyakhiwe ndim ivuka ngenxa yendlela endiyimise ngayo. Ngaloo ndlela eluthandweni, ngokungafaniyo nenkanuko, kukho umlinganiselo wengqiqo kunye nomnqweno kwaye ingeyiyo nje imvakalelo ephuma ngokuzenzekelayo ngaphandle kwam.
Uthando lukaThixo: imvakalelo kunye nengqondo
UMaimonides uthetha ngothando lukaThixo kwiindawo ezimbini kwincwadi yakhe. Kwimithetho esisiseko yeTorah uxoxa ngemithetho yothando lukaThixo kunye nazo zonke izinto eziphuma kuzo, kwaye nakwimithetho yenguquko uyayiphinda ngokufutshane (njengakwezinye izihloko eziphinda zivele kwimithetho yenguquko kwakhona). Ekuqaleni kwesahluko seshumi seTeshuvah, uthetha ngomsebenzi weNkosi egameni lakhe, kwaye phakathi kwezinye izinto ubhala:
A. Makungabikho mntu uthi ndenza imiyalelo yeTorah kwaye ndibandakanyeke kubulumko bayo ukuze ndifumane zonke iintsikelelo ezibhalwe kuyo okanye ukuze ndibe nobomi behlabathi elizayo, ndirhoxe kuzo izigqitho ezilunyukisiweyo yiTorah. ukuze ndisinde Lo, usebenza ngolu hlobo, ungumsebenzi woloyiko, ungengabo abaprofeti, akakhohlakali kwizilumko, ukanti uThixo akasebenzi ngale ndlela kodwa ngabantu belizwe nabafazi. kunye nabancinci ababafundisayo ukusebenza ngoloyiko bade bande kwaye basebenze ngothando.
B. Umsebénzi wothando usebenza neTorah kunye neMatza kwaye uhamba ngeendlela zobulumko kungekhona nantoni na emhlabeni kwaye kungekhona ukwesaba ububi nokungazuzi ilifa okulungileyo kodwa wenza inyaniso kuba iyinyaniso kwaye isiphelo sokulungileyo siza kuba. ngayo, kwaye esi sidima sisidima esikhulu kakhulu Wathandwa ngokwendlela awayesebenza ngayo kodwa hayi ngenxa yothando kwaye sisidima awabizwa ngaso Lowo Ungowokubongwa nguMoses ukuba kwathiwa kwaye wamthanda uYehova uThixo wakho, kwaye ngelixa umntu ethanda iNkosi uthando olufanelekileyo luya kwenza ngokukhawuleza zonke i-matzahs ​​ngothando.
UMaimonides kumazwi akhe apha ubonisa phakathi komsebenzi kaThixo negama lawo (o.k.t. kungekhona ngenxa yezilangazelelo zangaphandle) kunye nothando ngaye. Ngaphezu koko, kwiHalacha XNUMX uchaza uthando lukaThixo njengokwenza inyaniso kuba yinyaniso kwaye kungekhona nasiphi na esinye isizathu. Le yinkcazo yefilosofi nebanda kakhulu, kwaye iyakwahlukanisa. Akukho dimension yeemvakalelo apha. Uthando lukaThixo kukwenza inyaniso kuba uyinyaniso, yaye yiloo nto kanye. Kungeso sizathu uMaimonides ebhala ukuba olu thando luphawu lwezilumko (kungekhona iimvakalelo). Oku ngamanye amaxesha kubizwa ngokuba "luthando lwengqondo lukaThixo."
Kwaye apha, ngokukhawuleza kule halakhah ilandelayo ubhala ngokuchaseneyo ngokupheleleyo:
Isithathu. Kwaye lunjani uthando olufanelekileyo kukuba uya kumthanda uThixo uthando olunzulu nolunzulu kakhulu de umphefumlo wakhe ubotshelelwe kuthando luka-Thixo kwaye usoloko uphosisa kulo njengogula luthando ongqondo yakhe ingakhululekanga eluthandweni luka-Tixo. Loo mfazi kwaye usoloko ephosisa ngayo ngoMgqibelo Ukususela koku kuya kuba luthando lukaThixo olusentliziyweni yabathandi bakhe abasoloko belahleka kuyo njengoko kuyalelwe ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke. umzekeliso wokuba ndiyafa luthando, kwaye zonke iingoma zemizekeliso zenzelwe le njongo.
Apha uthando lushushu kwaye luneemvakalelo njengoko nothando lwendoda emfazini. Kanye njengoko kuchazwe kwiinoveli ezilungileyo kakhulu, kwaye ngakumbi kwiNgoma yeeNgoma. Isithandwa siyagula luthando kwaye sihlala siphutha kulo. Wayengakwazi ukumphazamisa nangawuphi na umzuzu.
Konke oku kunxulumana njani nomfanekiso wobukrelekrele obandayo ochazwe kwihalakhah yangaphambili? Ngaba uMaimonides wayedidekile, okanye ngaba wakulibala oko wayekubhale apho? Ndiya kuphawula ukuba oku asikokuphikisana esikufumanayo phakathi kweendawo ezimbini ezahlukeneyo kwimibhalo yakhe, okanye phakathi kukaMaimonides noko kuthethwa kwiTalmud. Kukho imithetho emibini esondeleyo kunye elandelelanayo apha ethetha iilwimi ezahlukeneyo ngokupheleleyo komnye nomnye.
Ndicinga ukuba umntu kufuneka alumke apha ngokusilela kwenzuzo kwi-decoding ehambelanayo. Xa uzisa umzekeliso ukuze ubonise into ethile, umzekeliso uqulethe iinkcukacha ezininzi kwaye azikho zonke ezihambelana nomyalezo kunye nomzekeliso. Umntu kufuneka ayifumane eyona ngongoma iphambili lo mzekeliso uze ukuyifundisa, kwaye angathathi ngokumxinwa ezinye iinkcukacha ezikuwo. Ndicinga ukuba umzekeliso okwi-Halacha XNUMX uza kuthi nangona uthando lukaThixo luyingqondo kwaye alunamvakalelo, kufuneka luhlale luphambuka kwaye lungaphazamiseki entliziyweni. Lo mzekeliso uza kufundisa ukuhlala ngokusisigxina kothando njengakuthando lwendoda emfazini, kodwa hayi ngokweemvakalelo zothando lothando.
Umzekelo wenguquko, intlawulelo noxolelo
Ndiya kubuyela umzuzwana kwakhona kwixesha lolonwabo laseYeruham. Ndithe ndilapho, ndeza kwisikolo samabanga aphakamileyo sokusingqongileyo eSde Boker ndaza ndacelwa ukuba ndithethe nabafundi kunye nabasebenzi ngexesha leentsuku ezilishumi zenguquko yocamagushelo, uxolelo noxolelo, kodwa kungekhona kwimeko yonqulo. Ndaqala amazwi am ngombuzo endiwubhekisa kubo. Masithi uRubhen ubethe uShimon waza watyiwa sisazela, ngoko ugqiba kwelokuba aye kumngxengxeza. Ucela uxolo ngokusuka emazantsi entliziyo yakhe aze amcenge ukuba amxolele. ULevy, kwelinye icala, naye wambetha uShimon (uShimon mhlawumbi wayeyinkwenkwe eyintloko yeklasi), kwaye akanakuzisola ngaloo nto. Intliziyo yakhe ayimthuthumbisi, akanamvakalelo malunga nalo mbandela. Akayikhathalelanga loo nto. Sekunjalo, uyaqonda ukuba wenze into embi waza wamkhathaza uShimon, ngoko naye ugqiba kwelokuba aye kucela uxolo kuye. Ingelosi uGabriyeli iza kuSimon onelishwa ize imtyhilele ubunzulu bentliziyo kaRubhen noLevi, okanye mhlawumbi uSimon ngokwakhe uyayiqonda into yokuba oku koko kwenzeka entliziyweni kaRubhen noLevi. Ufanele enze ntoni? Uyalwamkela uxolo lukaRuben? Kwaye kuthekani ngesicelo sikaLevy? Kwezi zicelo sisiphi esifaneleke ngakumbi ukuxolelwa?
Ngokungathandabuzekiyo, ukusabela kwabaphulaphuli kwakufana kakhulu. Isicelo sikaRuben siyinyaniso kwaye sifanelwe ukuxolelwa, nangona kunjalo uLevy unohanahaniso kwaye akukho sizathu sokumxolela. Kwelinye icala, ndaqiqa ngelithi ngokokubona kwam le meko yahluke ngokupheleleyo. Ukucela uxolo kukaRubhen kwenzelwe ukondla isazela sakhe. Uzisebenzela ngokwenene (centrifugally), ngenxa yomdla wakhe (ukuthomalalisa isisu esibuhlungu kunye nesazela sakhe). U-Levy, kwelinye icala, wenza isenzo esisulungekileyo. Nangona engaqaqanjelwa sisisu okanye yintliziyo, uyaqonda ukuba kukho into ephosakeleyo ayenzileyo yaye yimbopheleleko yakhe ukuxolisa uSimon owenzakeleyo, ngoko wenza oko kufunekayo kuye aze amcele ukuba amxolele. Esi sisenzo se-centrifugal, njengoko senziwa kwixhoba kungekhona yena.
Nangona entliziyweni yakhe uLevy akaziva nto, kodwa kutheni kubalulekile? Yakhiwe ngokwahlukileyo kuRubhen. I-amygdala yakhe (ejongene novelwano) yonakaliswe kwaye ngoko isikhungo sakhe seemvakalelo asisebenzi ngokuqhelekileyo. Ke ngoku?! Kwaye nokuba ulwakhiwo lwendalo lomntu kufuneka luthabathe inxaxheba kwintlonipho yethu yokuziphatha ngakuye? Ngokwahlukileyo koko, kanye lo kwenzakala okumvumela ukuba enze ngendlela esulungekileyo, ebonisa ukungabi nanceba nepheleleyo, kuphela ngenxa kaShimon, yaye ngenxa yoko ufanele ukuxolelwa .
Ukusuka kwelinye i-angle kungatshiwo ukuba uRuben wenza ngokweemvakalelo, ngelixa uLevy esenza isenzo ngokugweba kunye nesigwebo sakhe. Uxabiso lokuziphatha luza emntwini ngezigqibo azenzayo kungekhona iimvakalelo nethuku elivela okanye elingaveliyo kuye.
Imvakalelo njengesizathu okanye ngenxa yoko
Andithethi kuthi ukuba netyala okanye ukuzisola kuyalalisa isimilo sesenzo okanye somntu. Ukuba i-Levy ixolisa uShimon ngenxa yezizathu ezifanelekileyo (eziphakathi), kodwa kwangaxeshanye unemvakalelo yecala emva kokulimala akwenzileyo kuye, isenzo siphelele kwaye simsulwa ngokupheleleyo. Okoko nje isizathu sokuba enze asiyiyo imvakalelo, oko kukuthi, ukugubungela imililo engaphakathi kuye, kodwa ukuzisa impiliso kuSimon oxhwalekileyo. Ubukho bemvakalelo, ukuba akusiyo imbangela yesenzo soxolelwaniso, akufanele kuphazamise ukuvavanywa kokuziphatha kunye nokwamkelwa kwesicelo sokuxolelwa. Umntu oqhelekileyo unemvakalelo enjalo (i-amygdala inoxanduva kuyo), nokuba ifuna okanye ayifuni. Kucacile ke ngoko ukuba ayikuthinteli ukwamkelwa kwesicelo. Kodwa ngokuchanekileyo ngenxa yale mvakalelo nayo ayibalulekanga apha, kuba ivele ingalandeli isigqibo sam kodwa ngokwayo (luhlobo lwethuku). Ithuku alibonisi ingqibelelo yokuziphatha okanye ukusilela. Indlela esiziphatha ngayo ixhomekeke kwizigqibo esizenzayo kungekhona ziimvakalelo okanye ithuku elivela kuthi elingalawulekiyo. Umlinganiselo weemvakalelo awuphazamisi kodwa ngesizathu esifanayo awubalulekanga kuxabiso lokuziphatha. Ubukho beemvakalelo bufanele bungathathi hlangothi kwisigwebo sokuziphatha.
Ukuba uvakalelo lwenziwa ngenxa yokuqonda ngokuqonda ingxaki yokuziphatha kwisenzo, oko kubonisa ukuziphatha kukaRuben. Kodwa kwakhona, uLevy ophethwe yi-amygdala kwaye ngoko akazange ahlakulele imvakalelo enjalo, wenza isigqibo esifanelekileyo sokuziphatha, kwaye ngoko ke akafanelekanga ukudunyiswa okungaphantsi kokuziphatha kunye noxabiso oluvela kuRubhen. Umahluko phakathi kwakhe noRubhen kuphela kwisakhiwo sabo sobuchopho kwaye kungekhona kwisigwebo sabo sokuziphatha kunye nesigqibo. Njengoko kuchaziwe, ukwakheka kwengqondo yinyaniso engathathi hlangothi kwaye ayinanto yakwenza noxabiso lokuziphatha lomntu.
Ngokufanayo, umbhali weBeading Dew ubhala kwintshayelelo yakhe kwileta C:
Kwaye ngokusuka koko ndikuthethileyo kuyo, khumbula into endayivayo abanye abantu bethetha ngendlela yengqondo malunga nesifundo seTorah yethu engcwele, bathi, umfundi ohlaziya izinto ezintsha kwaye onwabe kwaye avuyele isifundo sakhe, akayifundisi iTorah. , Kodwa lowo ufundileyo aze akunandiphe ukufunda kwakhe, uyangenelela ekufundeni kwakhe kunye nolonwabo ngokwalo.
Kwaye ngenene yimpazamo eyaziwayo. Ngokuchasene noko, ngenxa yokuba lo ngundoqo womyalelo wokufunda iTorah, ukuba ube mithandathu kwaye ujabule kwaye ujabule kwisifundo sakhe, kwaye amazwi eTorah aginywa egazini lakhe. Yaye ekubeni wayewanandipha amazwi eTorah, wanamathela kwiTorah [yaye ubone amagqabaza eRashi Sanhedrin Noah. D.H. kunye neglu].
Abo "bangalunganga" bacinga ukuba nabani na owonwabileyo kwaye unandipha isifundo, oku kulimaza ixabiso lenkolo lokufunda kwakhe, ekubeni lenziwa ngenxa yolonwabo kwaye kungekhona ngenxa yezulu (= ngenxa yalo). Kodwa le yimpazamo. Uvuyo nolonwabo aluphambuki kwixabiso lenkolo lesenzo.
Kodwa eli licala elinye kuphela lengqekembe. Emva koko wongeza elinye icala lakhe:
Kwaye uModina, ukuba umfundi akakho ngenxa ye-mitzvah yokufunda, kuphela ngenxa yokuba evuya kwisifundo sakhe, kuba kuthiwa kukufunda kungekhona ngenxa yakhe, njengoko esitya i-matzah kungekhona ngenxa ye-mitzvah kuphela. ngenxa yokutya ubumnandi; Bathi ke bona, Akayi kuphinda abandakanyeke nanye into ngaphandle kwegama lakhe elithe washiywa. Kodwa ufunda ngenxa ye-mitzvah kwaye uyakonwabela ukufunda kwakhe, kuba sisifundo segama layo, kwaye yonke ingcwele, ngenxa yokuba ulonwabo nalo luyi-mitzvah.
Oko kukuthi, uvuyo kunye nolonwabo aluphambuki kwixabiso lesenzo logama nje luhlonyelwe kulo njengempembelelo yecala. Kodwa ukuba umntu ufunda ngenxa yolonwabo kunye novuyo, oko kukuthi ezo ziimpembelelo zokufunda kwakhe, ngokuqinisekileyo ukufunda kungekhona ngenxa yakhe. Apha babenyanisile "bengalunganga." Kwisigama sethu kuthiwa impazamo yabo ayikokucinga ukuba uphononongo akufuneki luqhutywe ngendlela ye-centrifugal. Ngokwahlukileyo koko, zichanile ngokupheleleyo. Impazamo yabo kukuba ubukho bolonwabo kunye nolonwabo lubonisa kwimbono yabo ukuba esi sisenzo se-centrifugal. Ayiyomfuneko ngenene. Ngamanye amaxesha ulonwabo kunye novuyo ziimvakalelo eziza kuphela njengesiphumo sokufunda kwaye azenzi zizathu zoko.
Buyela kuthando lukaThixo
Isiphetho esivela kwizinto ngoku ngoku kukuba umfanekiso endiwuchaze ekuqaleni awuphelelanga, kwaye imeko inzima kakhulu. Ndahlula phakathi kothando (centrifugal) kunye nenkanuko (centrifugal). Ndandula ke ndahlula phakathi kothando olungokweemvakalelo nolwengqondo, yaye sabona ukuba uMaimonides ufuna ukuba nengqondo ekrelekrele kunothando olungokweemvakalelo. Inkcazo kwimihlathi yokugqibela inokuchaza ukuba kutheni.
Xa uthando lunovakalelo, ludla ngokuba nomyinge we-centripetal kulo. Xa ndisiva imvakalelo enamandla yothando lweemvakalelo ngomntu othile, ngoko ke izenzo endizithabathayo ukuze ndiwuphumelele zinomlinganiselo onomtsalane kum. Ndiyayixhasa imvakalelo yam kwaye ndifuna ukuzalisa ukusilela kweemvakalelo endizivayo logama nje ndingayifumananga. Nokuba luthando hayi inkanuko, okoko nje inomlinganiselo weemvakalelo kubandakanya ulwalathiso oluphindiweyo lwesenzo. Andisebenzeli intanda okanye intanda kuphela, kodwa nam. Ngokwahlukileyo, uthando lwengqondo olusulungekileyo ngaphandle komlinganiselo weemvakalelo, ngokwenkcazo sisenzo esisulungekileyo se-centrifugal. Andinako ukuswela kwaye andizithinteli iimvakalelo ezingaphakathi kum ukuba kufuneka ndibaxhase, kodwa ndisebenza kuphela ngenxa yentanda. Ke ngoko uthando olunyulu luthando lwengqondo, lweplatonic. Ukuba uvakalelo ludalwe ngenxa yoko, alunako ukulimaza, kodwa kuphela nje ukuba luyisiphumo kwaye aluyiyo inxalenye yesizathu kunye nokukhuthaza izenzo zam.
Oku kunokucacisa umbuzo wendlela umntu anokuyalela ngayo uthando lukaThixo, nothando ngokubanzi (kukwakho nomyalelo wokuthanda uvuyo nothando lolunye uhlanga). Ukuba uthando luyimvakalelo ngoko luvela ngokwethuku olungekho kum. Uthetha ukuthini ke umthetho wothando? Kodwa ukuba uthando lungumphumo wokugweba ngokwengqondo kungekhona nje imvakalelo, ngoko kukho indawo yokuhlanganisana.
Kulo mongo, kukuphawula kuphela okunokuthi kuboniswe ukuba yonke imiyalelo esebenza ngeemvakalelo ezinjengothando nentiyo ayijikeli kwiimvakalelo kodwa kumlinganiselo wethu wobukrelekrele. Kanye njengomzekelo, uR. Yitzchak Hutner uzisa umbuzo owawubuzwa kuye ukuba uMaimonides uwubala njani umyalelo wokuthanda uHagare kwikhoram yethu, ekubeni uqukiwe kumyalelo wokuthanda uthando. UHagare ungumYuda yaye ngenxa yoko umele athandwe ngenxa yokuba engumYuda, ngoko wongezelela ntoni umyalelo wokuthanda uHagare? Ke ukuba ndiyamthanda uHagare lowo, ngenxa yokuba engumYuda njengokuba ndiwathanda onke amaYuda, andiwugcinanga umthetho wokuba ndimthande uHagare. Ke ngoko, i-RIA iyacacisa, akukho kuphinda-phinda apha, kwaye i-mitzvah nganye inomxholo wayo kunye nendlela yobukho.
Oku kuthetha ukuba umthetho wokuthanda uHagare ubukrelekrele hayi iimvakalelo. Kubandakanya isigqibo sam sokumthanda ngenxa yesizathu esithile. Olu asilothando olufanele lubethelele kum ngokwethuku ngokwalo. Akukho nto yeqela malunga noku, njengoko i-mitzvos ibhenela kwizigqibo zethu kwaye kungekhona kwiimvakalelo zethu.
Intshumayelo kaChazal yothando lokuchwayita ibala ingqokelela yezenzo ekufuneka sizenze. Yaye le yindlela uMaimonides ayibeka ngayo ekuqaleni kwendinyana yesine yeNkosi, kodwa:
UMitzvah wenza ngamazwi abo ukuba atyelele abagulayo, athuthuzele abalilayo, akhuphe abafileyo, angenise umtshakazi, apheleke abamenyiweyo, ajongane nazo zonke iimfuno zokungcwaba, athwale egxalabeni, nelilac phambi kwakhe. yenza isijwili, umbe, ungcwabe, ugcobe umtshakazi nomyeni, uShiur, nangona zonke ezi matzah ziphuma emazwini abo, ziphelele kwaye zithande ummelwane wakho njengoko uzithanda wena, zonke izinto ofuna abanye bazenze kuwe. babenza abazalwana benu emthethweni nasezincwadini.
Kwakhona kubonakala ngathi i-mitzvah yothando lothando ayikho malunga nemvakalelo kodwa imalunga nezenzo.
Oku kwakhona kucacile kwindinyana kwi-parsha yethu ethi:
Emva kwayo yonke loo nto, kwaye emva koko, kwaye kunjalo, nangona kunjalo,
Uthando luguqulela kwisenzo. Kwaye kunjalo ngeendinyana zeParashat Akev (ebizwa kwiveki ezayo. Duteronomi XNUMX: XNUMX):
Uze umthande uThixo woThixo wakho, ugcine isigxina sakhe, nemimiselo yakhe, namasiko akhe, namasiko akhe, yonke imihla.
Ngaphezu koko, iSages zikwafuna iivesi kwiparsha yethu malunga neempembelelo ezibambekayo (Brachot SA AB):
Kwaye kuzo zonke iindawo - uTanya, uR. Eliezer uthi, ukuba kuthiwe emphefumlweni wakho kutheni kusithiwa emhlabeni wakho wonke, kwaye ukuba kuthiwe ezweni lakho lonke kutheni kusithiwa emphefumlweni wakho wonke, ngaphandle kokuba umntu onomzimba othandekayo kuye , Kule nto kuthiwa kuyo yonke into.
Ngaba uthando lunomtsalane kwinto ethile okanye kwizibizo zayo?
Kwiincwadi zeenqwelo ezimbini kunye nebhaluni kwisango lesibini ndahlula phakathi kwento kunye neempawu zayo okanye izihloko. Itafile ephambi kwam inezinto ezininzi: yenziwe ngomthi, inemilenze emine, inde, ikhululekile, imdaka, ingqukuva kunye nokunye nangaphezulu. Kodwa yintoni itafile ngokwayo? Abanye banokuthi itafile ayiyonto kodwa le ngqokelela yeempawu (oku mhlawumbi yiloo nto ifilosofi uLeibniz ayithathayo). Kwincwadi yam apho ndiye ndaphikisa ukuba oku akuyonyani. Itheyibhile yenye into ngaphandle kwengqokelela yeempawu. Kuchane ngakumbi ukuthi uneempawu zakhe. Ezi mpawu ziimpawu zakhe 
Ukuba into yayingeyonto ngaphandle kwengqokelela yeepropathi, ngoko kwakungekho mqobo ekudaleni into nakweyiphi na ingqokelela yeepropati . Ngokomzekelo, imifuno yelitye le-jade emnweni womntu othile kunye nesikwere setafile esecaleni kwam kunye ne-airness yamafu e-cumulonimbus ngaphezu kwethu iya kuba yinto esemthethweni. ngoba kutheni? Kuba akukho nto inazo zonke ezi mpawu. Zezinto ezahlukeneyo. Kodwa ukuba into ayikho nto kodwa iqoqo leempawu, ngoko akunakwenzeka ukuthetha njalo. Isiphelo sesokuba into ayiyongqokelela yeempawu. Kukho ingqokelela yeempawu eziyibonakalisayo.
Phantse yonke into ethethwayo malunga nento, efana netafile, iya kwenza inkcazo malunga neempawu zayo. Xa sisithi imdaka okanye iplanga okanye inde okanye ikhululekile, zonke ezi ziimpawu zayo. Ngaba kunokwenzeka ukuba iingxelo zijongane netafile ngokwayo (amathambo ayo)? Ndicinga ukuba kukho iingxelo ezinjalo. Umzekelo, ingxelo yokuba itheyibhile ikhona. Ubukho asilophawu lwetheyibhile kodwa yimpikiswano malunga netafile ngokwayo. Enyanisweni, ingxelo yam evela ngasentla ukuba kukho into efana netafile ngaphaya kweseti yeempawu yinkcazo yokuba itheyibhile ikhona, kwaye kucacile ukuba nayo ijongene nayo kwaye kungekhona nje ngeempawu zayo. Ndicinga ukuba inkcazo yokuba itafile yinto enye kwaye ayizimbini yinkcazo malunga nayo kwaye ingeyiyo inkcazo okanye uphawu lwayo.
Xa ndandijongana nalo mahluko kwiminyaka eyadlulayo omnye wabafundi bam wathi ngokokubona kwakhe uthando ngomntu luguqukela emathanjeni esithandwa kungekhona kwiimpawu zakhe. Iimpawu yindlela yokudibana naye, kodwa ke uthando luguqukela kumnini weempawu kwaye kungekhona kwiimpawu, ngoko lunokusinda nangona iimpawu ziguquka ngandlela-thile. Mhlawumbi yile nto yathethwa zizilumko kwiPirkei Avot: Kwaye lonke uthando olungaxhomekekanga kuyo nayiphi na into - lutshitshise nto kwaye lutshitshise uthando. "
Enye ingcaciso yokuvalwa komsebenzi wasemzini
Lo mfanekiso unokucacisa ngakumbi ukuvalwa komsebenzi wangaphandle. Kwiparsha yethu (kwaye ndiya kucela) iTorah yandisa ukwalelwa komsebenzi wangaphandle. IHaftarah (uIsaya isahluko M) ikwamalunga necala layo elichaseneyo, ukungazalisekiswa kukaThixo:
Nhmo Nhmo Ami Iamr Gd wakho: Dbro on hearted Iroslm and Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole ofunda entlango Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Gia Mount Insa kunye ne-Isflo kunye noHih Hakb Lmisor kunye noHrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Nadshading ukumbulala kwigumbi lokulala Irah Bzrao Ikbtz Tlaim noBhiko Isa Alot Inhl: S. Ngubani Mdd Bsalo amanzi kunye Smim Bzrt Tcn kunye Cl Bsls Afr emhlabeni kunye Skl Bfls Hrim noGbaot Bmaznim: Ngubani Tcn Emoyeni Ikok kunye Ais Atzto Ilmodiano: Ngubani uNowatz noIbidho Barho noIbinho Msft noIlmdho ubulumko kunye noGqr Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli kunye noCshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: kwaye iLbnon akukho Di Bar kwaye uHito akakho uDi Aolh: S Cl Hgoim Kain Ngdo Mafs noTho Nhsbo kuye: kwaye U-Al Who Tdmion uthixo kunye noMh Dmot Tarco kuye: Hfsl Nsc ngcibi kunye neTzrf Bzhb Irkano kunye noRtkot umkhandi wegolide wesilivere: Hmscn Ixesha elihle lokuya kwihlabathi Th Cdk izulu kunye no-Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti ilizwe Ctho Ash: umsindo Bl Ntao umsindo Bl Zrao umsindo Bl Srs Bartz Gzam Same to Nsf Bhm kunye Ibso kunye Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni kunye Asoh Sao Iamr incopho engcwele: Anicm noRao Who Bra Aba ngamaHmotzia Ngenani lomkhosi wabo kubo bonke egameni leNkosi uya kubiza uninzi lwabo kwaye akhaliphe amandla omntu kungabikho ungekhoyo:
Esi sahluko sijongana nenyaniso yokuba uThixo akanamfanekiselo womzimba. Akunakwenzeka ukuhlela umlinganiswa kuye kwaye umthelekise nenye into esiyiqhelileyo. Ngoko unxibelelana njani naye? Ufikelela njani kuyo okanye uqonde ukuba ikhona? Iivesi ezilapha ziphendula oku: kuphela ngokwasengqondweni. Siyazibona izenzo zakhe yaye kuzo sigqiba kwelokuba ukho yaye unamandla. Udala amaziko omhlaba (wadala ihlabathi) kwaye uhlala kwisangqa somhlaba (uqhuba). Khangela, ngubani na owadala abo bachitha inani lomkhosi wabo kubo bonke egameni likaYikra.
Ngokwecandelo langaphambili kunokuthiwa u-Gd akanasimo, oko kukuthi, akanazo iimpawu ezibonwa sithi. Asiyiboni kwaye asinawo amava oluvo ngokunxulumene nayo. Sinokufikelela kwizigqibo kwizenzo zayo (kwisigama sefilosofi engenelelayo, inezihloko zesenzo kwaye hayi izihloko zezinto).
Uthando lweemvakalelo lunokwakheka ngokubhekiselele kwinto ethengisa kuthi ngokuthe ngqo, esiyibonayo okanye amava. Emva kwamava kunye nokudibana okuthe ngqo, uthando oluvelayo luyakwazi ukujika emathanjeni, kodwa oku kufuna ukuxolelaniswa kwezihloko kunye neempawu zentanda. Ngabo sidibana naye. Ke ngoko kunzima ukuxoxa ukuba kukho uthando olungokweemvakalelo kwiziko esifikelela kulo kuphela ngeengxoxo kunye nokuthelekelela kwengqondo kuphela, kwaye asinandlela yokunxibelelana ngokuthe ngqo nalo. Ndicinga ukuba indlela yothando lwengqondo ivuleleke kuthi apha ikakhulu.
Ukuba kunjalo, akumangalisi ukuba i-parsha kunye ne-haftarah zijongana nokuthatha kukaThixo, ukuba i-parsha izisa umyalelo wokumthanda. Xa kufakwa ngaphakathi ukuthatyathwa kukaThixo, isiphelo esicacileyo sesokuba uthando ngakuYe lufanele kwaye lube kwindiza yengqondo kuphela hayi kwinqwelomoya yeemvakalelo. Njengoko kukhankanyiwe, oku ayisiyonto ingalunganga kuba njengoko sibonile ukuba lolona thando lusulungekileyo nolona lugqibeleleyo kubo bonke. Kungenzeka ukuba olu thando luya kudala iimvakalelo zothando kuye, kodwa esi sihlomelo ubukhulu becala. Inxalenye engabambekiyo yothando lwengqondo lukaThixo. Uvakalelo olunjalo alunakuba sisiqalo kuba akukho nto inokubambelela kuyo. Njengoko benditshilo, imvakalelo yothando ibonwa kumfanekiso wentanda, kwaye ayikho kuThixo.
Mhlawumbi omnye umlinganiselo unokubonwa apha ekuthintelweni komsebenzi wangaphandle. Ukuba umntu udala umzobo kaThixo, uzama ukuwuguqula ube yinto ebonwayo apho umntu anokwenza unxibelelwano oluthe ngqo lwengqondo, ke uthando ngakuye lunokuba nemvakalelo, olunobuntu obuphakathi obubeka isithandwa hayi intanda. iziko. U-Gd ke ngoko ufuna kwi-haftarah yethu ukuba ayifake ngaphakathi ukuba akukho ndlela yakuxelisa (ukuyenza ibe nakwesiphi na isimilo), kwaye indlela yokufikelela kuyo yintanda-bulumko-ingqondo, ngokuthelekelela. Ke ngoko, uthando ngaye, olujongene nalo mcimbi, luya kuba nomlingiswa onjalo.
Ndicinga ukuba kukho amaqhekeza ambalwa omsebenzi wasemzini kwiimbono zonqulo zabaninzi bethu. Abantu bacinga ukuba umsebenzi wonqulo obandayo uyinto engafanelekanga, kodwa apha ndiye ndazama ukubonisa ukuba unomlinganiselo opheleleyo nosulungekileyo. Uthando lweemvakalelo luhlala lubambelela kumfanekiso kaThixo, ke lunokubandezeleka ngenxa yezixhobo zalo zonqulo lwasemzini. Ndizamile ukuxoxa apha ndixhasa ithisisi yokuba uthando lukaThixo lufanele ukuba lube lolwahlukileyo, ngokwengqondo nangokweemvakalelo.
 Kuyinyaniso ukuba ukuba i-amygdala ye-Levy yonakele, kuya kuba nzima kakhulu, kwaye mhlawumbi akunakwenzeka, ukuba aqonde into ayenzileyo. Akakuqondi ukuba yintoni ukwenzakala ngokweemvakalelo nokuba kutheni kumenza buhlungu uSimon. Ngoko ke ukulimala kwi-amygdala akunakumvumela ukuba aqonde intsingiselo yesenzo sakhe, kwaye akayi kucinga ukuba kufuneka axolise. Kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba lo ngumsebenzi ohlukeneyo we-amygdala, engabalulekanga kangako kwimeko yethu. Ingxabano yam yeyokuba, ukuba ngokwethiyori uyaqonda ukuba umonile uSimon nokuba ayimthuthumbisi, isicelo sokuxolelwa siphelele kwaye simsulwa. Iimvakalelo zakhe azibalulekanga ngokwenene. Kuyinyani ukuba ngokobuchwephesha ngaphandle kokuba neemvakalelo ezinjalo ngengakhange akwenze oko kuba ebengabuqondi ubunzulu besenzo kunye nentsingiselo yaso. Kodwa lo ngumcimbi wobugcisa kuphela. Isenokunxulumana nokuvula kwam ukuba yingqondo eyenza izigqibo, kwaye ithatha iimvakalelo njengenye yezinto ekufuneka ziqwalaselwe.
Indikhumbuza ngentetho endakha ndayiva eTED evela kwingcali yemithambo-luvo eyayonakaliswe ingqondo kwaye ingakwazi ukuva iimvakalelo. Wafunda ukulinganisa ezi zenzo zeemvakalelo ngokobuchwepheshe. NjengoJohn Nash (owaziwa ngencwadi kaSylvia Nasser ethi, Wonders of Reason, kunye nefilimu eyalandelayo), owafumana indawo ethelekelelwayo yomntu waza wafunda ukuyityeshela ngendlela yobugcisa ngokupheleleyo. Wayeqinisekile ukuba ngokwenene babekho abantu ababemngqongile, kodwa wafunda ukuba ezi yayiziingcamango ezikhohlisayo yaye wayefanele azityeshele nangona amava ayesekho ngaphakathi kuye ngokupheleleyo. Ngenjongo yengxoxo yethu, siya kucinga nge-Levy njenge-amygdala eyonakeleyo engenamandla ovelwano ngokweemvakalelo, oye wafunda ukuqonda ngokwengqondo kunye nokubandayo (ngaphandle kwemvakalelo) ukuba izenzo ezinjalo okanye ezinye zilimaza abantu, kwaye ukuxolelwa kufuneka kufunelwe ukuxolisa. . Kucingelwa kwakhona ukuba isicelo sokuxolelwa sinzima kuye njengakumntu ozivayo, kungenjalo kungaxoxwa ukuba isenzo esinjalo asifanele sixatyiswe ukuba akabizi ixabiso lengqondo kulowo usenzayo.
 Bona oku ngokweenkcukacha kwincwadi yeshumi elinanye kwi-Talmudic Logic Series, uMlinganiswa wePlato weTalmud, uMichael Avraham, uIsrael Belfer, uDov Gabay kunye no-Uri Shield, eLondon 2014, kwinxalenye yesibini.
 Maimonides kwiingcambu zayo ithi i-mitzvot ephindwe kabini engayihlaziyiyo into engaphaya kwe-mitzvah yomnye umrhumi akufanele ibekwe.
4 Kananjalo umthetho awufani nowokuthanda ukuqola; Jonga iinkcazo zethu apho.
 Nangona le iyimithetho ephuma emazwini ababhali, kwaye ngokucacileyo umthetho uDauriyta nguewe ngemvakalelo, kodwa lowo wenza ezi zenzo ngokuthanda kwakhe ummelwane ukwazalisekisa kule mitzvah Dauriyta. Kodwa akukho mqobo kulwimi lukaMaimonides apha ekuqondeni ukuba kwaneDauriyta mitzvah eneneni ethetha ngolwalamano lokuncoma inokuba yeyasengqondweni kungekhona ngokweemvakalelo njengoko sele sichazile apha.
 Njengoko ndichaze apho, lo mahluko unxulumene nokwahlula kuka-Aristotelian phakathi kwento kunye netyala okanye umcimbi kunye nefom, kunye nefilosofi kaKant ukwahlula phakathi kwento ngokwayo (i-nuumana) ukuthetha njengoko ibonakala emehlweni ethu ( isenzeko).
 Bona apho imizekelo endiyinikeyo kwibali elikrelekrele lombhali waseArgentina uBorges, "Ochber, Telen, Artius", kwiindunduma eziguqulelwe nguYoram Bronowski.
 Ndibonise apho ukuba ubungqina bungaziswa koku buphuma kwingxoxo ye-ontological yobukho bukaThixo. Ukuba ubukho bento buphawu lwakhe, kuba ngoko ubukho bukaThixo bunokungqinwa ngaphandle kwengcamango yakhe, into engenakwenzeka. Nangona ubone ingxoxo ecacileyo yale ngxabano kwincwadi yokuqala kwisayithi. Apho ndazama ukubonisa ukuba ingxabano ayinasiseko (nokuba akukho mfuneko).
Ukucamngca emva kokuhamba kongasekhoyo uR. Binyamin David Levy (uluhlu lwe-124)
IDarush, Pepper, Uthando lukaSirayeli kunye Nokulunga Kwalo (Kholam 52)
Iingoma zeLizwe Endandilithanda: Umbono Wobuhle kwiSifundo Selizwe Lasekhaya (Uluhlu 153)
Iingcinga ezili-16 “Ngothando: Phakathi Kweemvakalelo Nengqondo (Uluhlu lwama-22)”
30 Tishrei 10 - 2016/12/11 ngo XNUMX:XNUMX
Kuthetha ukuthini ‘uthando lwengqondo’, ekubeni uthando luyimvakalelo?
Okanye ngaba le yimpazamo kwaye ngaba eneneni ithetha ireferensi kunye noqhagamshelo kwenye - kwaye 'kwingqondo' injongo ayisiyiyo yokuqonda uhlalutyo kodwa yeyokuqonda eyona nto ilungileyo ukuyenza?
Kwaye malunga nomzekeliso wothando, oko akuthethi ukuba uthando luneemvakalelo, kodwa umongo walo mzekeliso yinyaniso yokuba umntu 'akakwazi' ukusoloko ephambuka ... Mhlawumbi yinyani yokuba le intuition 'yoyisa' umntu wonke Ngaba uyamenyezela…
Ingxoxo yam kukuba akunjalo. Iimvakalelo ubukhulu becala luphawu lothando hayi uthando ngokwalo. Uthando ngokwalo sisigqibo sobulumko, ngaphandle kokuba uvakalelo luvela mhlawumbi ndiye ndagqiba.
Andiboni ukuba kuthetha ukuthini ukuhlalutya. Esi sisigqibo esifanelekileyo, njengoko uMaimonides wabhalayo kwindinyana yesibini.
Ukuba umzekeliso awuzi ukuzocacisa umsebenzi wam, ithini ingongoma yawo? Undixelela ukuba kuzakwenzeka ntoni kum isuka kuye? Mhlawumbi weza kuchaza into eyayingumsebenzi wam.
30 Tishrei 10 - 2016/12/13 ngo XNUMX:XNUMX
Kuyabonakala ukuba kukho umahluko phakathi 'komsebenzi osuka eluthandweni' apho urabhi wayethetha ngesithuba, kunye ne'mitzvot ahavat ha' (apho uMaimonides ajongana nemithetho kaYeshuat)….
KwiHalachot Teshuvah Maimonides uthetha ngento ezisa iEden ekunquleni igama - kwaye eneneni amazwi karabhi ayeyisa...
Kodwa ngenxa yokuba yi-mitzvah, i-mitzvah yothando lukaThixo ayijongani nento ezisa umntu emsebenzini, kodwa inoxanduva phezu kwakhe ukuba aphuhle (njengamazwi kaHagli Tal - uvuyo oluphuhlisa isiqingatha somsebenzi)... Ukubukela indalo
Ndivuma ngokupheleleyo. Ngokwenene olu lunxulumano phakathi kwemithetho esisiseko yeTorah kunye neTeshuvah. Ukanti kwi-H. Teshuvah uchaza uthando ngokwenza inyaniso kuba yinyaniso. Yintoni phakathi kwaloo nto kunye novakalelo? Kusenokwenzeka ukuba uthando apho zombini iindawo zibandakanyeke luthando olufanayo. Kwi<em>Basic Torah ubhala ukuba uthando lufumaneka ngokuqwalasela indalo (le yintelekelelo ebendisoloko ndithetha ngayo), yaye kwiTeshuvah uchaza ukuba intsingiselo yalo kumba wokusebenza ngothando kukwenza inyaniso kuba iyinyaniso. . Kwaye angamazwi am.
Ingcamango yokwesaba ngokuqinisekileyo yahlukile phakathi kweYeshiva kunye neHalachot Teshuvah
Oku kusengqiqweni kakhulu. Xa sithetha ngokusebenzela ukwenza imali nokuthetha ngokuthenga okuthile ngemali, ngaba igama elithi “imali” livela kwiintsingiselo ezahlukeneyo? Ngoko kutheni xa uziva uthandwa okanye xa usenza okuthile ngothando, igama elithi “uthando” livela kwiintsingiselo ezimbini ezahlukeneyo?
Ngokuphathelele uloyiko, unxulumano oluphakathi kokoyika ukuphakanyiswa nokoyika isohlwayo nako kumele kuxoxwe ngalo. Ukuba ingqikelelo efanayo isetyenzisiwe kufuneka ibe nentsingiselo efanayo, okanye ibe ngaphantsi kunonxulumano olwaneleyo phakathi kweentsingiselo. Kuzo zombini ezi meko ukukhwankqiswa kuyafana, kwaye umahluko kukumbuzo wokuba yintoni evuselela uloyiko, isohlwayo okanye ukuphakanyiswa.
Ukutolikwa kwiHalacha C kuvakala kuncinci kum.
Kunzima ukwahlula umlinganiselo wamava kumazwi kaMaimonides kwaye uthi ulumkisa kuphela "ngokuchithwa kweTorah." Ngokuqinisekileyo kubonakala kuchaza amava anzulu omthandi kaThixo okuba ekuphela kwento emxhalabisayo ehlabathini luthando lukaThixo. Andivumelani konke konke kunye nokucingelwa kwenqaku ukuba amava angokweemvakalelo abeka umthandi kwindawo kwaye uthando oluhlukanisiweyo kuphela lubeka intanda kwindawo. Kubonakala kum ukuba kukho inqanaba elingaphezulu kokuhlukana okubandayo kwaye kuxa intando yesithandwa idibanisa kunye nentando yesithandwa kunye nokuzaliseka kwentando yentanda kuba kukuzalisekiswa kwentando yomthandi kwaye ngokuchaseneyo. "yenza intando yakho njengoko athanda". Kulo thando, akunakwenzeka ukuthetha ngesithandwa okanye isithandwa phakathi kodwa malunga nomnqweno omnye oqhelekileyo kubo bobabini. Ngokoluvo lwam, uMaimonides uthetha ngako oku xa ethetha ngomnqweno womthandi kaThixo. Ayichasani ukwenziwa kwenyaniso kuba yinyaniso enokubangelwa kukunqwenela inyaniso.
1. Kum ayibonakali inzima kangako. Ndaphawula ngendlela echanekileyo yokuphatha imizekeliso.
2. Ukucinga kwinqaku akukhona ukuba amava eemvakalelo abeka umthandi kwiziko, kodwa ukuba ngokuqhelekileyo nayo inomlinganiselo onjalo (ubandakanyekayo).
Umcimbi walo mbutho untsonkothileyo unzima kakhulu kum kwaye andicingi ukuba uyasebenza, ngakumbi hayi kwinto engabonakaliyo nengabonakaliyo njengoThixo, njengoko ndibhalile.
4 Kwanokuba ayichasi ukwenziwa kwenyaniso kuba iyinyaniso, kodwa ngokuqinisekileyo ayifani nakuye. UMaimonides ukufanisa oku ngothando.
30 Tishrei 10 - 2016/12/14 ngo XNUMX:XNUMX
Njengesiqhelo, inika umdla kwaye ixhokonxa iingcinga.
Kwangaxeshanye, intsingiselo ekwiMaimonides ayikokuba ‘unxunguphalo nje kancinane’, yaye ingekuko nokungxamiseka okukhulu, ikukugqwetheka nje (ekuxoleleni). UMaimonides wenza konke okusemandleni akhe ukuchaza imeko yeemvakalelo, yaye umnyanzelela ukuba athi kuseyinto esengqiqweni neyahlulayo (njengoko uyichazayo) [kwaye amagqabaza ‘ngokusilela’ ngokunxulumene nemizekeliso akakholeleki konke konke kwimizekeliso yethu. umxholo, kuba apha asikokutyeshela nje imizekeliso ].
Ngokuphathelele umbuzo oqhelekileyo malunga nokubaluleka kwemvakalelo, kufuneka kuqatshelwe ukuba yonke imvakalelo iyisiphumo sokuqonda kwengqondo ethile. Ukoyika inyoka kubangelwa kulwazi lwethu lokuba iyingozi. Umntwana omncinci akayi koyika ukudlala nenyoka.
Ngoko ke, akuchanekanga ukuthi imvakalelo lithuku nje. Lithuku elenziwe lasebenza ngenxa yombono othile. Ke ngoko umntu ongonakaliswanga buchopho, kwaye akukho mvakalelo ivela kuye emva kokwenzakala kwakhe komnye umntu, kuye kuvele ukuba umbono wakhe wokuziphatha unesiphene.
Ngokoluvo lwam, oku kukwayinjongo kaMaimonides. Njengoko ulwazi lomntu ngenyaniso lukhula, kuba njalo nemvakalelo yothando esentliziyweni yakhe. Kubonakala kum ukuba izinto zicacile kamva kwisahluko (Halacha XNUMX):
Yinto eyaziwayo necacileyo ukuba uthando lukaThixo alubotshwanga entliziyweni yomntu – ade asoloko elufezekisa ngokufanelekileyo aze ashiye yonke into esehlabathini ngaphandle kwakhe, njengoko wayalela wathi ‘ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke. ' - kodwa ngombono wayesazi. Kwaye ngokoluvo, kuya kubakho uthando, ukuba kancinci kwaye kuninzi. "
Cacisa apha: a. Uthando yimvakalelo ebophelelayo entliziyweni yomntu.
B. Umyalelo okwiTorah umalunga neemvakalelo.
Isithathu. Ekubeni le mvakalelo isiphumo sengqondo,
Intsingiselo yomthetho wokuthanda uThixo kukukhula kwengqondo kaThixo.
Andizange ndibone kumazwi kaMaimonides apha ukuba yimvakalelo. Lulwazi kodwa aluyiyo imvakalelo. Anibuhoyi nobudlelwane buka B no C endibumeleyo kumazwi am.
Kodwa ngaphaya kwayo yonke le nto, andinangxaki kumgaqo wakho kumazwi akho, kuba nakwindlela yakho umsebenzi osemagxeni ethu ngumsebenzi wokuqonda, ukwazi nokwazi, hayi iimvakalelo. Ukuvakalelwa ukuba kudalwa ngenxa yoko - kuya kudalwa, kwaye ukuba akunjalo - ngoko akunjalo. Ngoko ke iimvakalelo zivela ekugqibeleni ngaphandle kokulawula kwethu. Ulwazi kunye nokufunda kusezandleni zethu, kwaye uvakalelo ubukhulu becala sisiphumo. Ngoko ke yintoni umahluko phakathi kwale nto uyinikelayo kunye nale ndiyibhalileyo?
I-CPM yomntu ongqondo yakhe yonakaliswe kwaye ayikwazi ukuthanda. Ngaba ucinga ukuba umntu onjalo akanako ukuwugcina umyalelo wothando lukaThixo? Ngokombono wam ewe.
Ekugqibeleni, ukuba sele ucaphule i-halakhah ebuzwayo e-Rambam, kutheni uyiphazamise? Nalu ulwimi olupheleleyo:
Kuyaziwa kwaye kucacile ukuba uthando lukaSikelelwe alubotshwanga entliziyweni yomntu ade asoloko elufezekisa ngokufanelekileyo aze ashiye yonke into esehlabathini ngaphandle kwalo, njengoko wayalela watsho ngentliziyo nomphefumlo wakho wonke esithi akathandi Kancinci kwaye kakhulu, ngoko ke umntu kufuneka kunye ngokwakhe aqonde kwaye afundiswe ngobulumko kunye neengqondo ezimazisa nge-cono yakhe njengamandla umntu anawo ukuqonda kunye nokufumana njengoko sibonile kwimithetho esisiseko yeTorah.
Kucacile kuthi ukuba olu luluvo hayi uvakalelo. Kwaye ubukhulu becala uvakalelo luyimveliso yengqondo. Umsebenzi wokuthanda uThixo awukho kwiimvakalelo kodwa usengqondweni. Kwaye i-NPM yokulimala kwengqondo.
Kwaye kunokwenzeka njani ukuba ungapheleli ngamazwi kaRabhi ekufezekiseni apho:
Into eyaziwayo necacileyo, njl. AA bubudenge besingazi ukuba kutheni le nto ingumyalelo, kwaye sitolika kwimiba emibini ulwimi lwesihobe njengobudenge kuDavide, kwaye omnye umcimbi wothando lwakhe uya kufezekisa kwimicimbi yakho ongayi kuhlawula ngayo. ingqalelo kubo
Ukuza kuthi ga ngoku kulungile kobu busuku.
1. Ngokoluvo lwam ibinzana elithi ‘ukubotshwa entliziyweni yomntu’ lifaneleke ngakumbi kwiimvakalelo kunengqiqo.
2. Ubudlelwane phakathi kuka-B no-C bungunobangela nesiphumo. Oko kukuthi: ingqondo ikhokelela eluthandweni. Uthando luzisa umsebenzi egameni lalo (asilothando kodwa 'ngumsebenzi ophuma eluthandweni', oko kukuthi: umsebenzi ophuma eluthandweni).
I<em>Seder kumazwi kaMaimonides inxulumene nombandela—umbandela wakhe awungomyalelo wothando lukaThixo (lo ngumbandela okwiziseko zeTorah) kodwa ngumsebenzi kaThixo, naxa eze kucacisa umsebenzi obalaseleyo. uchaza umlingiswa walo (igama - II) kunye nomthombo walo (uthando - XNUMX), Kwaye kamva uchaza indlela yokufikelela kulo thando (Da'at - HV).
Oku kuchazwe kumazwi kaMaimonides ekupheleni kweHalacha XNUMX: Emva koko kwiHalacha C ichaza ukuba yintoni uthando olufanelekileyo.
3. Umahluko phakathi kwamagama ethu mkhulu kakhulu. Ngokombono wam, ukugcinwa kwe-mitzvah kukuvakalelwa, oko kukuthi: uvakalelo luphakathi kakhulu kwaye aluyiyo imveliso engaphantsi kunye nengeyomfuneko. Lowo ujonga' uthando lukaPlato nolwahlukanisiweyo 'lothando lukaThixo' akayigcini i-mitzvah. Ukuba yonakele kwi-amygdala idlwengulwa ngokulula.
4. Andizange ndiyiqonde into eyongezwa sicatshulwe sokuqhubeka kolwimi lukaMaimonides
(Amagama athi “akamthandi Lowo ungoSikelelweyo [kodwa ngokwembono…]” akaveli kuhlelo lweFrenkel, ngoko andizange ndiwacaphule, kodwa intsingiselo iyafana. ibiyeyokuba kucace kuphela, kwaye nalapha intsingiselo iyafana)
1. Kulungile. Andiqinisekanga ngaloo nto.2. Ndiyavumelana nayo yonke le nto. Kwaye usenza inyaniso kuba yinyaniso ayibonakali kum ukuba inxulumene nemvakalelo yothando kodwa kwisigqibo sokuqonda (mhlawumbi imvakalelo yothando ihamba nayo, nangona kungenjalo. Bona iposi yam yangaphambili).
3. Ngoko ke ndihlala ndibuza ukuba kutheni sidibanisa into evele ngokwayo? Ubukhulu becala i-mitzvah kukwenza nzulu ulwazi kunye nomsebenzi wobukrelekrele, kwaye uthando oluvela ngokwendalo emva koko (linoyolo ikholwa) lubonisa ukuba uyenzile. Kungoko lowo ingqondo yakhe yonakeleyo akadlwengulwa, kodwa uthobela mitzvah ngokupheleleyo. Asinalo uphawu koku, kodwa uThixo uyazi kwaye ngoyena ulungileyo.
4. Isicatshulwa sokuqhubela phambili kolwimi lukaMaimonides sithetha ngesalathiso phakathi kothando nokwazi, okanye ubukhulu becala uthando luyimpembelelo yokwazi.
Kum kubonakala ngathi sizicacise ngokwaneleyo iindawo zethu.
Kanye malunga nombuzo wakho ophindaphindiweyo: izinto zilula kakhulu.
UThixo usiyalela ukuba sizive. Ewe!
Kodwa yintoni indlela yokwenza oko? Ukuphindaphinda uluvo.
Isimbo somfundi: ukugcinwa kwe-mitzvah - imvakalelo, isenzo se-mitzvah - ubuninzi bezimvo.
(Amazwi kaRabhi Solovitchik malunga neminye imitzvos ashicilelwe: umthandazo,
kodwa uphendule uthi, ukugcina umthetho kusentliziyweni).
Ukuba uzimisele ukwamkela ukuba kunokwenzeka ithiyori 'ukhathalelo malunga neemvakalelo
Olwethu kwaye hayi nje kwizenzo zethu kunye nezimvo, ngoko ke izinto ziyaqondakala kwaye azidideki kwaphela.
Emva koko uvakalelo aluyomfuneko nje 'ngemveliso' engeyomfuneko, kodwa ngumzimba we-mitzvah.
(Kwaye anxulumene apha ngamazwi adumileyo kaRab'a malunga nokungabawa.
Apho usebenzisa umgaqo ofanayo: Ukuba ukwazi kwakho kunyanisekile,
Kuyo nayiphi na imeko, imvakalelo yokubawa ayizukuvela)
Enyanisweni ubanga ukuba umntu owenza ngokwengqondo kwaye kungekhona ngokweemvakalelo ngumntu okhululekileyo kuphela, umzekelo, uthando lukaThixo luyingqondo kwaye alunamvakalelo, kodwa kubonakala ngathi kunokuthiwa nje njengomntu. onqanda iimvakalelo zakhe ubotshelelwe kubo hayi umntu okhululekileyo ngoko umntu osebenza ngokwengqondo ebotshelelwe kwingqondo yakhe hayi ekhululekileyo, ubanga ngakumbi ngothando ukuba uthando oluphezulu ngokweemvakalelo luchuku kuba ubukrelekrele obujikela kwenye ukuba bungazixhasi iimvakalelo (wena) kodwa obu bulumko buyazigcina wena uhluke njani kwi-egocentrism phakathi kwezi meko zimbini?
Ndiyakukhumbuza ukuba sakuba sithethile uyonwabele ingxoxo kwaye wandixelela ukuba kufuneka ubhale malunga nombandela wokuba kuphela umntu oqhuba ubomi bakhe ngokweHalacha ngumntu onengqondo, kwaye malunga nokukodwa kweTalmud kunye neHalacha ukuthatha imibono engabonakaliyo. kwaye zisebenze.
Kunokuthiwa ingqondo kunye novakalelo yimisebenzi emibini eyahlukeneyo enewonga elilinganayo. Kodwa kwisigqibo sengqondo intando ibandakanyeka ngelixa imvakalelo iyithuku elinyanzeliswa kum. Ndikwandise oku kwiincwadi zam zeNzululwazi yeNkululeko. enkosi ngesikhumbuzo. Mhlawumbi ndiza kubhala isithuba malunga nayo kwisayithi.
Ndicinga ukuba iya kuba nomdla kuwe http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
Zininzi ngakumbi iingxoxo ezinje, kwaye uninzi lwazo zonke zinengxaki yokungacaci kwezimvo (azichazi imvakalelo nengqondo. Phofu ke, ayinanto yokwenza namazwi am kuba ithetha ngomsebenzi wobuchopho kwaye ndithetha ngokucinga. Ukucinga kwenziwa ngaphakathi Ingqondo hayi ingqondo.Akacingi ngenxa yokuba engagqibanga ukwenza njalo kwaye "akayicingi." I-Neuroscience ithatha ukuba umsebenzi wobuchopho = ukucinga, kwaye yile nto ndiyibhalileyo ukuba ngokutsho koku kwakhona amanzi ahambayo abandakanyeka ekucingeni. umsebenzi.
Kwicandelo elilandelayo lenqaku ekuthethwa ngalo, uT.S. Ndiza kubonisa kwizibiyeli ezisikwere:
“Okokuthi, ulonwabo nolonwabo aluphambuki kwixabiso lesenzo logama nje zidityaniswe naso njengesiphumo esibi. Kodwa ukuba umntu ufunda ngenxa yolonwabo kunye novuyo, oko kukuthi ezo ziimpembelelo zokufunda kwakhe, ngokuqinisekileyo ukufunda kungekhona ngenxa yakhe. Apha babenyanisile "bengalunganga." Kwisigama sethu kuthiwa impazamo yabo asikuko ukuba bebecinga ukuba uphononongo akufuneki luqhutywe ngendlela ye-centrifugal [= iseli ye-centrifugal]. Ngokwahlukileyo koko, zichanile ngokupheleleyo. Impazamo yabo kukuba ubukho bolonwabo kunye novuyo lubonisa ngokoluvo lwabo ukuba esi sisenzo se-centrifugal [= iseli ye-centrifugal]. Ayiyomfuneko ngenene. Ngamanye amaxesha ulonwabo kunye novuyo ziimvakalelo eziza kuphela njengesiphumo sokufunda kwaye azenzi zizathu zoko.
2. "Ukuchasana" kwimithetho emibini emeleneyo yaseRambam malunga nothando, kubonakala kuhleli nje ngamazwi ombethe onamaso owazise wona kamva waza wawacacisa kwiTotoD. Yiloo nto kanye eyathethwa nguMaimonides apha ngothando lukaThixo. Inonobangela wengqondo, kunye nesiphumo seemvakalelo. Ukwachaza uthando athetha ngalo kwiMithetho eSisiseko yeTorah P.B. Ukubukela indalo nokugqalwa kobulumko nokulunga kukaThixo. Inyaniso-yolwazi / unobangela wengqondo- uvelisa [kwakhona] umphumo weemvakalelo. Kwaye yiloo nto kanye ayithethileyo apha.
1. Yinyani kakhulu. Ndalungisa.
2. Apha andivumi. Kubonakala ngathi akukho mahluko unjalo phakathi kwezi halachah zimbini ngokukaMahal Teshuvah.
'Uthando lwasimahla' - kwicala le nto kwaye hayi kwinxalenye yezihloko zayo
Nge-16 kaTammuz 07 - 2020/17/39 ngo-XNUMX:XNUMX
Ukukhanya kokwahlula okucetywayo apha phakathi kothando kwicala lethambo kunye nothando kwicala lezihloko - kunokwenzeka ukuqonda ingcamango 'yothando lwamahhala' oluqulunqwe nguRabbi Kook.
Kukho imeko apho isimilo somntu okanye ubunkokeli bakhe bugqwethekile kangangokuba kungabikho phawu lulungileyo analo lunokuviwa oluya kuthi luvuse imvakalelo yendalo yothando ngakuye.
Kwimeko enjalo, kunokubakho kuphela 'uthando ethanjeni', ukuthanda umntu kuphela ngenxa yokuba 'yintandokazi yomntu owadalwa eB'Tselem' okanye 'intandokazi yakwaSirayeli ebizwa ngokuba ngamakhwenkwe kuloo ndawo', abathi nakumsebenzi ophantsi 'wamakhwenkwe anganyanisekanga' 'babizwa ngokuba ngamakhwenkwe', Uninzi 'lwenceba yoyise' lukho koonyana bakhe.
Nangona kunjalo, kufuneka kuqatshelwe ukuba uthando lukabawo kubantwana bakhe nakweyona meko yabo ihlwempuzekileyo ayilothando nje olukhululekile. Ikwaphenjelelwa lithemba lokuba okuhle okufihlwa emakhwenkweni ngenkani – nako kuya kuphumelela. Ukholo olomeleleyo lukabawo kubantwana bakhe noloMdali kubantu bakhe—lusenokusasaza impembelelo yalo entle, yaye ke ngoko ‘luze luyibuyisele intliziyo yooyise koonyana ‘kunokubuyisela iintliziyo zoonyana kooyise.
Kubalulekile ukuqaphela apha ingcaciso ehlaziyiweyo ecetywa nguBat-Galim Sha'ar (umama kaGil-ad XNUMX) kwingqikelelo 'yothando lwasimahla'. Ngokutsho kwakhe, 'uthando lwasimahla' 'luthando lwabo lobabalo'. Ukufumana inqaku elilungileyo kwabanye-kunokuvuselela uthando oluphelileyo kwaye kuphefumle ubomi kubudlelwane.
Kwaye ngokuqinisekileyo izinto zihambelana namazwi kaRabi Nachman waseBreslav kwiTorah Rafev malunga 'Ukucula ku-Elki ngelixa mna', xa ndivuya 'kancinci ngakumbi', kwintlantsi encinci yokulungileyo, okanye ngokuchanekileyo ngakumbi: incinci leyo. uhlala emntwini - kwaye 'ukukhanya okuncinci - gxotha ubumnyama obuninzi'.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 ngo 17:XNUMX
Urabhi uya kundicacisela ukuba yintoni umahluko phakathi kothando lweemvakalelo kunye nenkanuko endingayivayo.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 ngo 42:XNUMX
Ndandingawuqondi umbuzo. Umahluko phakathi kwezi mvakalelo zimbini awunxulumananga namazwi am. Wonke umntu uyavuma ukuba akufani. Ezi ziimvakalelo ezimbini ezahlukeneyo. Inkanuko ngumnqweno wokuthatha into ethile, ndibe ngowam. Uthando luvakalelo oluziko lilinye kwaye ingendim (i-centrifugal kwaye hayi i-centrifugal). Mna apha ndahlula phakathi kwemvakalelo kunye nokuqonda (uthando lweemvakalelo kunye nobukrelekrele).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 ngo 37:XNUMX
"Kodwa ukuba uthando luyisiphumo somgwebo wengqondo kwaye kungekhona nje imvakalelo, ngoko kukho indawo yokuyiyalela."
Kodwa kunjalo, ndingayalelwa njani ukuba ndiqonde into ??? Ukuba uyandicacisela ndibe ndingekaqondi okanye andivumi ayilotyala lam!
Kufana nokudibana nomntu owayehlala kwinkulungwane ye-10 ukuqonda imodeli ye-heliocentric, ukuba uyayiqonda impilo kodwa ukuba akunjalo ukuba enze ntoni!
Ngaphandle kokuba uthi i-mitzvah yokuqonda uThixo ithetha ukuba ubuncinane uzame ukuqonda kwaye ukuba awuzange uqonde ngokubi uyadlwengulwa.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 ngo 43:XNUMX
Abasebenzi kufuneka bawuphonononge lo mbandela de ube uqonda. Ukucinga kukuba xa uqonda into uya kuyithanda. Ukuba awuphumeleli uyadlwengulwa.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 ngo 43:XNUMX
Kwaye omnye umbuzo: Ugcina kwaye umthande njani ummelwane wakho njengawe siqu ukuba luthando lwengqondo, yintoni enokuqondwa apha?
Intsingiselo yokuba ngumzalwana wakho kwaSirayeli imele iqondwe. Ukuqonda ukuba abantu luhlobo lwentsapho (kwintsapho yinto yendalo).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 ngo 51:XNUMX
Ngaba ukutsho umsebenzi wento ephambi kwayo yingxelo malunga namathambo ayo? Umzekelo, ukuthi itafile "yinto evumela ukuba kubekwe izinto phezu kwayo" luphawu lwalo okanye ngamathambo ayo?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 ngo 44:XNUMX
Ndicinga ukuba luphawu. Mhlawumbi oku kukwayinxalenye yombono weedesika ngokubanzi. Kodwa ngokunxulumene netafile ethile ephambi kwam le yinkalo yayo.